Laga soo bilaabo Billy Porter ilaa Baby Yoda, waa kan waxa aad kadhigtay sanadkaan - dadka - WAA KU SAMEEYSAA
Laga soo bilaabo Billy Porter ilaa Baby Yoda, waa kuwan wixii aad Google ku soo gashay sanadkan - dadka
Waxaa qoray Elizabeth Wolfe iyo Ralph Ellis | CNN
2019, dadka ka kala yimid daafaha dalka ayaa u jeestay Google jawaabaha oo dhan. Hada Google ayaa daaha ka qaaday Raadinta sanadka 2019 muuqaalka guud ee raadinta ugu caansan sanadka.
Laga soo bilaabo dareenka viral ee heesta Lil Nas X "Wadada Old Town" Gawaarida rooga cas ee xad dhaafka ah ee Billy Porter cilmi baarista ugu caansan sanadka ayaa loo soo bandhigay qof walba, iyadoo na siineysa aragti ah waxa ay dhab ahaantii Mareykanku rabaan inay ogaadaan.
Liiska waxaa kujira wax walba oo ka imanaya wararka iyo madadaalada ilaa su'aasha ah "What the ...".
Macsalaameyntii 2010s, mashiinka raadinta ayaa sidoo kale bixiyay macluumaad ku saabsan raadinta isbeddelka tobanka sano.
Xusuusnow heesta "Saraawiisha Dhulka"? Haa, sidoo kale maanaan sameynin illaa aan isaga ku aragno liiska.
Hoosta, waxaan soo bandhignay tobanka guud ee raadinta guud ee sanadka si aad uguxirto xusuustaada, oo ay weheliso dhammaan qaybaha Google Year In Search.
Le adeegga socodka ugu kulul sanadka ku guulaystay kaalinta koowaad ee raadinta Google sanadkan. Fikraddu macnaheedu maahan mid kacaan ah, laakiin liistadeeda nolosheeda dhammaadka leh ee nostalgic iyo cinwaannada cusub ayaa rafcaan u leh dad badan.
Ha iloobin, Disney Plus ayaa na siisay hadiyadda sii socota ee bixinta - Ilmaha Yoda ee "Mandalorian-ka".
Geerida lama filaanka ah ee jilaa 20-sano jir ah Cameron Boyce ayaa ku dhacday waxyaabo badan cilmi baarayaal sanadkan.
Boyce waxaa laga helay isagoo aan ka jawaabin gurigiisa California California bishii Luulyo 6. Baadhis xaqiijiyay dhimashadiisa hurdada suuxdin ka dib.
Wuxuu ka soo muuqday barnaamijka 'Disney Channel show' Jessie 'laga soo bilaabo 2011 ilaa 2015. Wuxuu sidoo kale ka soo muuqday' Muraayadaha ',' Eagle Eye 'oo ay weheliyaan Shia LaBeouf iyo' Grown Ups 'oo uu weheliyo Adam Sandler, iyo' Descendants ' Kanaalka Disney.
3 Nipsey Hussle
Nipsey Hussle Raadiyaha waxtarka leh la toogtay bannaanka dukaanka dharkiisa bishii Maajo 31, taasoo ku keenta mowjado naxdin leh bulshada kufsiga.
Rapper-ku wuxuu aasaasay sumadiisa, All Money In, sanadkii 2010, sida uu sheegayo IMDB. Wuxuu sidoo kale la soo shaqeeyay daraasiin fanaaniin guuleystay oo ay ka mid yihiin Kendrick Lamar, Drake, YG, Ty Dolla Sign, Meek Mill, iyo Young Thug.
4. Duufaanta Dorian
Waxay ahayd sanad duufaanno ah xaaladaha cimilada ba'an, iyo Duufaan Dorian kama reebin. Duufaanta ayaa ku dhufatay Bahamas, Mareykanka iyo Canada bishii Sebtember, waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qof Bahamas.
Magaalooyin badan oo xeebta ku teedsan wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah wuxuuna soo saaray khasab khasab ah iyadoo dabeylihii xoogga duufaantu socdeen. xeebta. Duufaantu waxay waxyeello ballaaran u geysatay meelo badan oo ay ka mid tahay Bahamas.
Ciyaaryahankii hore ee NFL wuxuu ahaa laga xoreeyay New England Patriots ka dib markii ay eedeeyeen laba haween ah anshax xumo galmo, oo ay kujirto kufsi . Brown wuxuu dafiray eedeymaha.
Patriots-kii ayaa ahaa kooxdii seddexaad ee hoos u dhigta Brown ee 2019. Maalmo kadib markii la siidaayay, isaga ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka inuu "mar dambe ciyaari doonin NFL".
Xidiggii hore "Beverly Hills 90210" Xiddigga Luke Perry ayaa Geeriyooday 4-ta Maarso ka dib markii uu ku dhacay istaroog weyn .
Perry waxaa loo toogtay inuu caan noqdo shaqsigii caanka ahaa ee caanka ahaa Dylan McKay. Waxa kale oo uu door ku lahaa taxane taxane ah oo TV ah "Buffy the Vampire Slayer" iyo "Riverdale," wuxuuna ka soo muuqday filimka Quentin Tarantino, "Once Once a Time in Hollywood", oo soo ifbaxay geeridiisa kadib.
Filimkii Disney iyo Marvel ayaa ka hor maray "Avatar" si uu u noqdo filimka ugu macaashka badan mar walba . Filimkan, oo ay wada jilayaan Robert Downey Jr. iyo Chris Evans, ayaa guud ahaan ka soo xareeyay $ 2,789 bilyan oo adduunka oo dhan dhammaadkii bishii Luulyo.
8. "Ciyaaraha carshiga"
HBO's "Game of Thrones" ayaa sii daayay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay, taageerayaashiina ku tuuray jawi hoose rajooyinka aan la jaan qaadi karin iyo ka bixitaanka . Qaar badan ayaa dareemay in sheekooyinka sheekooyinka lagu degdegay oo caajis ahaa, halka kuwa kale ay dhex mareen iyaga oo aan tusin bandhigoodii ay jeclaayeen. iPhone 11
Iphone-ka iska daayay iPhone 11 iyo 11 Pro ku qalabaysan kaamirooyin casri ah iyo midabbo cusub oo dhalaalaya, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay doortaan inay cusboonaysiiyaan astaamaha cusub ee yaryar ee ay soo bandhigto iyo in kale.
toban. Jussie Smollett
Jilaaga "Boqortooyada" waxaa soo dhexgalay khilaaf ka dib markii jilaaga uu ka warbixiyay weerar dambi nacayb ah bishii Janaayo taas oo baarayaasha markii dambe ay ku soo gabagabeeyeen sheegasho been ah. loogu talagalay in lagu wanaajiyo astaanteeda guud. ] ayaa gudbiyay dacwad ka dhan ah isaga oo doonaya inuu ka soo ceshado in ka badan $ 130 si uu u daboolo waqtiga dheeriga ah ee booliiska intii uu socday baaritaanka
Tani waa dhamaadka koorsadeena shilka ee raadinta ugu badan ee la raadiyay ee 2019, laakiin fiiri raadinta kale ee Google ee raadinta qaybta hoose.
2. Cathedral Notre Dame
3. Haweenka Koobka Aduunka
4. Weerarka aagga 51
6. Filimaanta ee El Paso
8. Amarka dowladda
9. Siyaasadda Jebinta Xogta ee Equifax
10. Dhulgariir California
6. Badbaadada 21
4. Nabadda Huffman
6. Rummy malek
9. Hoolka Bailey
8. Sion Williamson
1. Nidaamka soonka ee ku meel gaarka ah
2. Cuntada Dr Sebi
3. Cunnooyinka Noom
4. Cuntada Kalooriyo ee 1200
5. Keto ultra cun
6. Cunnada Golo
7. Cuntada Dubrow
8. Cunto Sirtfood
9. Malaha karbohaydraytyo, sonkor ma leh
10. Cuntada Endomorph
1. Qaabka adag
2. Qaab dhismeedka Gumeysiga
3. Qaabka guryaha loo yaqaan 'Cape Cod'
4. Guriga Isbaanishka
5. Farshaxanka qurxinta farshaxanka
6. Guriga nooca Jabbaan
7. Naqshadeynta guriga farshaxanka
8. Qaabka ku meel gaarka ah
9. Hab-dhaqan Prairie
10. Guryaha casriga ah
1. Dharka gabadha
2. Kooxda Eboy
3. Dharka gabadha macaan
4. Biker dharka gaaban
5. Kooxda gabdhaha ee VSCO
6. Kooxda dharka lagu ciyaaro
7. Dharka denim cad
8. Kooxda Fila
9. Kooxda Horyaalka
10. Jaakad maqaar ah oo go'an
1. Qaabka xerada
2. Qaabka Egirl
3. Qaabka Eboy
4. Qaabka Steampunk
5. Qaabka Harajuku
6. Qaabka preppy
7. Qaabka Yankii
8. Qaabka cuntada
9. Qaabka gabdhaha VSCO
10. Qaabka Emo
1. Cunto karinta adhijir
2. Cuntada digaagga Parmigiana
3. Cuntad isku darista Ham
4. Character set recipe
5. Snickerdoodle cookie
6. Cuntada dhalaalaysa
7. Castciatore digaag karinta
8. Cuntada Recipe ee Popeyes Chicken Sandwich
9. Cuntada la kariyey ee Tater tot pan pan
10. Cuntada la kariyo ee King
1. Maldives way safraan
2. Safarka japan
3. Safarka Bora Bora
4. Socdaal ilaa Vegas
5. Socdaal ilaa Mexico
6. Safarka Alaska
7. Socdaal ku socda New Orleans
8. Safarka California
9. Socdaal ilaa New York
10. Safarka Costa Rica
2. "Kabtan Marvel"
4. "Sheekada Toy 4"
5. "Libaax Boqorka"
6. "Waa Cutubka Labaad"
7. "Barafoobay 2"
8. Hal mar mar Hollywood
10. "Sheekooyin cabsi leh si aan wax uga sheegto mugdiga"
2 Nipsey Hussle
5. Noocyada Takhtarka (Tyler Skaggs)
9. Lacagta Eddie
10. Elman Cummings
1. Arooska Miranda Lambert
2. Jennifer Lawrence aroos
3. Justin Bieber arooskiisa
4. Arooska Miley Cyrus
5. Arooska Chiquis Rivera
6. Arooska Chris Pratt
7. Arooska Joe Jonas
8. Arooska Elvis Duran
9. Arooska Zoë Kravitz
10. Arooska Jake Paul Tana Mongeau
Fannaaniinta iyo kooxaha
2. Badbaadada 21
5. $ AP Rocky ah
Dhibcaha isboorti ee xirfadeed
1. Muwaadiniinta Washington
2. Qaraha Boston
3. Cardinal-ka Saint-Louis
7. Beerta Chicago
8. Mataanaha Minnesota
9. Raptors Toronto
1. "Wadada Old Town"
2. "Fardaha 7"
5. Runta ayaa dhaawacaysa
6. "Waan kaa lumay inaad i jeclaato"
8. "Waad mahadsantahay,"
9. "Ku dhaqaaq"
10. Saaxiib ahow
1. "Ciyaaraha carshiga"
2. "Waxyaabaha qariibka ah"
3. "Markay na arkaan"
6. "Dalladda Dalladda"
8. "Waa ii Dhintay"
9. "Badbaadin R. Kelly"
Rooga cas dadka
1. Gawaarida casaanka ee Billy Porter
2. Rooga gaduudan ee Cardi B
3. Marwada Gaga rooga cas
4. Amy Schumer ninkeeda rooga cas
5. Jeneraal Gaduudkii Jenny McCarthy
6. BTS Giraaf rooga gaduudan
7. Caitlyn Jenner rooga gaduudan
9. Brie Larson rooga gaduudan
10. Brienne ee rooga casaanka Tarth
1. Waa maxay soonaha 51
2. Waa maxay gabar vsco
3. Waa maxay momo
4. Waa maxay boomer
5. Joojinta barnaamijka
6. Waa maxay mood kaamku
7. Waa maxay Disney Plus
8. Waa maxay sanduuqa shimbiruhu
9. Waa maxay Mandalorian
10. Waa maxay Brexit
1. Aaway sri lanka
2. Aaway Super Bowl sanadkan
3. Aaway aagga 51
4. Aaway 21 Savage's
5. Aaway duufaantii hada
6. Aaway Xur
7. Halkee ka timid kooxda kubada cagta Clemson
8. Aaway Jaamacadda Gonzaga?
9. Aaway Filimka Waxyaabaha la duubey
10. Aaway Koorsada Golf Xeebta Pebble
1. Ilmaha yoda
2. Xun yar yar
3. Ilmaha boqortooyada
4. Ilmaha Kim Kardashian Kanye West
5. Baby Cardi B
6. Baby Trey Songz
7. Ilmaha Andy Cohen
8. Baby Shawn Johnson
9. Ilmaha Amy Schumer
10. Ilmaha Hoda Kotb
™ & © 2019 Cable News Network, Inc., oo ah Shirkad WarnerMedia ah. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Paul Eric Kingué wuxuu dib u dhigay furitaanka weyn ee Maurice Kamto
Cagta PSG - PSG: Tonali oo ku taal Paris, waa wax ka badan xanta - FOOT 01